Indlela yokulinganisa i-ROI yeeNkqubo zeMfono | Martech Zone
Indlela yokulinganisa i-ROI yeeNkqubo zeMfono
NgoLwesibini, nge-9 kaDisemba ngo-2014 Douglas Karr
Sisebenza kunye nenkampani yamaqabane ekuphuhliseni usetyenziso lweselfowuni lwe-Android kunye ne-iOS ngoku. Ngelixa sizenzile ii -apps zethu, le app yesiko ifuna ingqalelo ethe kratya kunokuba besicinga. Ndicinga ukuba kuthatha ixesha elide ukusebenza kwintengiso, ukungeniswa, kunye nokupapashwa kwesicelo esiphathwayo kunexesha lophuhliso lweapp! Ngokuqinisekileyo siya kuhlengahlengisa ulindelo lomsebenzi onje kwixa elizayo.
Le app sisicelo esitshintshayo somthengi owakhele ikhalityhuleyitha kubaxhasi babo- ngakumbi iinjineli. Ayisiyonto ilusizi ukunceda iinjineli ukuba zenze amawaka ahlukeneyo ngokulula. Uhlelo lokusebenza alwenzi thengisa nantoni na ayenzi indleko nantoni na. Isicelo kukubonelela ngexabiso kumthengi. Ukuphuhlisa izixhobo ezinje ukwenza imisebenzi yabantu ibe lula sisicwangciso-qhinga esikhulu sentengiso kuba iphindaphinde iindawo zokuchukumisa kunye nomthengi ukuze uhlale ungaphezulu kwengqondo xa bafuna iimveliso okanye iinkonzo zakho.
Njengesicelo sokutshintsha, umsantsa esiwuchongileyo (ngaphandle kwezinye izibalo ezingachanekanga) yayikukuba kwakungekho nxibelwano kwisicelo esiselfowuni phakathi kwenkampani kunye nomsebenzisi. Ke songeze umnxibelelwano olula kwaye ndicofa-ukuthetha-neempawu zokuthetha, kunye nokutsala iividiyo zabo ze-Youtube-To-To kunye nezithuba zabo zebhlog zamva nje. Ngokutyhala ezo feed kumsebenzisi, usetyenziso lweselfowuni ngoku lubonelela ngesango eliphuculweyo kakhulu lokwakha imbuyekezo engcono kutyalo-mali kwaye mhlawumbi ufumane nokuthengisa ngokuthe ngqo ekusebenziseni.
Nokuba ujolise ekuvuseleleni abathengi okanye abasebenzi, le infographic igubungela zonke iziseko: ukuchaza iinjongo zakho, ukuvavanya iindleko, ukwabela ii-KPIs, kunye nokufikelela kubalo lwe-ROI ngamanani abandayo, anzima. Yiya ngaphaya kwesicwangciso ngeemetriki kunye nokulingana okungqina ukuba ukushukumiseka kweshishini kuyongeza ngokwenyani. UJason Evans, i-SVP, isiCwangciso-qhinga kunye noLawulo lwe-Innovation
le infographic evela eKony uhamba umthengisi kuyo yonke imiba eyahlukeneyo yokubala iMbuyekezo yoTyalo-mali yokuphucula usetyenziso lweselfowuni kusetyenziswa indlela ye-NPV (Net Present Value). Ngolwazi oluthe kratya, qiniseka ukukhuphela iphepha elimhlophe likaKony Ukulinganisa iFowuni: Ukulinganisa impumelelo yeLinge lakho leFowuni.
tags: kwi-infographickonyukufunyanwa kwesoftwareIindleko zesoftwareIinjongo zeapp mobileusetyenziso lweselfowuni kpisinqanaba lokugcina usetyenziso lweselfowuniusetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindowsmobile ukubuya kwesicelo kutyalo maliuphuhliso lweselulaimpembelelo yeselfowuniinfographic yeselulaukufunyanwa kweselfowuni okuhamba phambilimobile tcoIxabiso langoku lenethanpvukubuya kutyalo maliubunini beendleko zizonke
IWebhusayithi yakho ayisiyiProjekthi
Rant: Iphasiwedi yeConundrum kunye namava oMsebenzisi
Ngomhla wama-10 ku-Disemba 2014 ngo-10: 22 PM
I-infographic entle, enkosi ngomsebenzi wakho.